Ogaden News Agency (ONA) – Xubno Booliiska Itoobiya Katirsan oo Musuq Maasuq Looqaqabtay.
Xubno Booliiska Itoobiya Katirsan oo Musuq Maasuq Looqaqabtay.
Wararka ka imanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in xabsiga ladhigay qaar kamid ah ciidanka Booliiska Itoobiya oo hab dhaqan aan wanaagsanayn kula kacay dad shacab ah.
Sida xogta aan kuhelayno Booliiska magaalada Addis Ababa ayaa xubno Booliiska katirsan xabsiga dhigay kadib markii sida lasheegay ay ku kaceen falal anshaxa ka baxsan iyagoo waliba meel fagaare ah jooga.
Xubnaha xabsiga ladhigay ayaa lasheegay in ay lacago baad ama guno ah kaqaateen ganacsato ree Itoobiya ah, kuwaas oo dukaamo kulahaa magaalada Addis Ababa, gaar ahaan agagaarka Gandi Hospital.
Xubnaha Booliiska katirsan ayaa lasheegay in gacanta lagu dhigay xili ay lacago laaluush ah kaqaadanayeen qaar kamid ah ganacsatada magaalada Addis Ababa oo loohaystay in ay wadanka kasaareen lacagihii adkaa.
Booliiska Addis Ababa ayaa sheegay in ay sooqaqabteen ganacsatadii iyo xubnihii ay lacagaha siiyeenba, kuwaas oo sida hadalka loodhigay fal dambiyeed gacanta kula jiray.
Heerka musuq maasuqa ee wadanka Itoobiya ayaa lasheegayaa in uu aad usareeyo waxaana musuqa siibadanaya lagumacneeyay baahida iyo mushaar la’aanta wadanka kajirta, taas oo Booliiska iyo ciidamada ku kalifta in ay lacago laaluush ah qaataan.